Warbixin ku saabsan Isbaarooyinka yaala Koonfurta Somaliya | Daafeet	Saturday, October 22nd, 2016	Home
Dec 3, 2012 - Aragtiyood	Kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya waxaa qaamuuska Afka Soomaaliga ku soo biiray erayo badan oo aad loo isticmaalo mis ahaana waxaa ka mid ah ISBAAROwhich online bingo is best.
Isbaaradu waa qaab lagu kasbado dhaqaale xaaraan ah iyadoo loo maraay dhac loo gaysanaayo hantida sida gaarka ah loo leeyahay amaba tan danta guud ee ay dadku ka dhexayso,winpalace mobile casino
Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya iyo beelaha ku hubaysan gudaha magaalada ee Hawiye ayaa waxay ku caanbaxeen 22kii sano ee lasoo dhaafay dhaqaale ku raadin habkan xaaraanta ah ee Isbaarada waxayna gaareen in ay isbaara u dhigtaan wixii dhaqaaqabavirtual roulette game.
Hadaba habkan ay caadeysteen beelaha aan kor ku soo sheegnay ayaa waxa ka dhiidhiyay Madaxweyne Xasan Shiikh oo u sheegay Isbaaroolayda beelaha Hawiye inay magaalada ka qaadaan isbaarooyinka hadii kalena uu xoog ku qaadi doonowatch keno live online queensland.
top ten best online casinosInkasta oo ay ku dhowyihiin 60 Isbaarooyinka yaal Muqdisho ayaa hadana ilaa iyo maanta waxaa la qaaday in ka badan 25 Isbaaro kuwaasi oo ay dhogteen Beelo,madaxda Degmooyinka,Taliyayaalciidan,Maleesho beeleed iyo koox iskood u abaabulan iyo weliba madaxweynaha maamul goboleedka GalMudug.
top casino sites ukIsbaarooyinka ilaa maanta la qaadayna waxaa ka mid ahaa;
top 10 bonus casinos1- Isbaarada Ex kontorool Afgooye: Waa isbaarada ugu waqtiga dheer, lacagta ugu badanna ay ka soo xerooto. Dad xog ogaal ah ayaa Raxanreeb u sheegay in isbaarada la dhigay sanadkii 1992-kii markii ay dhacday dawladii dhexe, inkastoo kooxo kala duwan ay kala qabsadeen mudadaasi.
Isbaarada Ekis Kontorool Afgooye waa tan ugu weyn uguna mudada dheerthree card poker games online.
Isbaarada Ekis Kontorool waxay u taallay ciidamo ka tirsan dawlada oo ku abtirsada saddex beelood oo ka mid ah kuwa Muqdishoslots jungle im games.
slot online casinos2- Isbaarada Baar Ismaaciil: Waxay ku taalla afaafka hore ee degmada Afgooye. Isbaaradan oo la sameeyay dhowr bilood ka hor markii ciidamada dawlada ay la wareegeen degmada Afgooye. Waxay u taalla ciidan ka tirsan militariga dawlada waxayna asal ahaan ku abtirsadaan labo beelood.
slots jungle game3- Isbaarada Ceelasha Biyaha; Waa kontorool yar oo dhowaan laga sameeyay deegaanka Ceelasha Biyaha. Waxaa lacago kooban baabuurta kaga qaadan jiray ciidamada booliska iyo kuwa waddooyinka ee dawlada oo si habqan ah baabuurta gacmaha ugu taagta.
real pc slot machine games software4- Isbaarada Isgoyska Banaadir; Ma ahan jidgooyo muuqata, hase yeeshee maleeshiyo qabiil oo asal ahaan ka haray maleeshiyaadkii hogaamiye kooxeedka Cabdi Qeybdiid ayaa lacago kaga qaadan jiray baabuurta iyo dukaamada ku yaalla suuq cusub oo halkaasi laga sameeyay.
real money casino uk5- Isgoyska KM5; Maleeshiyo ku abtirsada kuwa Isgoyska Banaadir ayaa iyaguna baabuurta kaga gurta lacago aan xad lahayn isgoyska Soobe oo ka tirsan degmada Hodan.
6- Isbaarada Nasteexo: Waa jidgooyo taalla qeyb ka mid ah degmada Wadajir, xaafada ay ku taallo ee Nasteexo ayaana loogu magacdaray. Waxaa maamula maleeshiyo beeleed ku xoogan xaafadaasipokie machine online gambling.
7- Isbaarada Buulo Xuubey; Waxaa jooga maleeshiyo uu leeyahay gudoomiye ku xigeenka degmada Wadajir Xuseen Bootaan, waxaana dhaqaalsha ka yimaada isbaarada qaadan jiray gudoomiye ku xigeenka iyo maleeshiyadiisaplay slots for real money on iphone.
8- Isbaarada Dan Wadaagaha; Waa jidgooyo ku taalla isgoyskii loo yaqaanay Dan-Wadaagaha ee degmada Wadajir oo ku dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho. Dhaqaalaha isbaarada ka yimaada waxaa uu u xaroodaa gudoomiyaha degmada Wadajie Axmed Daaci iyo maleeshiyadiisaplay slots online cash.
play online bingo real money9- Isbaarada Jiirada Garoonka; Waa jidgooyo taalla afaafka garoonka diyaaradaha Muqdisho, maleeshiyada joogta iyo dhaqaalahaba waxaa ka masuul ahaa gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Daaci.
play online craps flash10- Isbaarada Suuqa Weyn; Waxay taallaa bartamaha suuqa weyn ee degmada Wadajir. Waxaa maamula maleeshiyo daacad u ah gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Daaci.
11- Isbaarada Mac-macaanka; Waa jidgooyo laga sameeyay xaafada Mac-Macaanka ee degmada Dharkeenley, waxaana dhaqaalaha ka yimaada kala qeybsan jiray maleeshiyo iyo taliyaha booliska degmada Dharkeenley oo ay isku heyb yihiinonline slots best.
12- Isbaarada Jiiro maskiin; Waxay ku taallay dhabarka dambe ee safaaradii hore ee Mareykanka. Waxaa iska leh maleeshiyo beeleed ku sugan degmada Dharkeenley. Isbaaradan waxay kuwa kale kaga duwaneyd in mararka qaar baabuurta iyo rakaabka lagu dhibaateyn jirayonline slot machines in canada.